Ihe Ndị Ahịa Gị Na-eche n'Ebe Nzuzo | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 27, 2014 Wednesday, February 26, 2014 Douglas Karr
Ndi oru nta akuko nwere obi uto banyere otu ulo oru si eji ya eme ihe. Ndị na-azụ ahịa anaghị echebara ya echiche? Dịka onye na-azụ ahịa, naanị ihe m na-atụ anya bụ ka etinye data ahụ iji melite ahụmịhe m nwetara site na ika ahụ. Mgbe ụfọdụ, nke ahụ bụ obere nchekwube, mana mgbe m zara ọtụtụ ajụjụ wee mezie ahụmịhe ahụ, ana m aga n'ihu. Kedu maka ndị ahịa gị? Ha na-eche maka otu ị si eji data ejidere na njikọ aka ọ bụla na ntụgharị na ụzọ?
Ihe omuma ihe omuma a sitere na SDL na eme ka ndi ahia ghara ikwuputa uzo nke ikesa data, ma n’otu oge ha adighi eji data ha nwere - ma enwere isi ihe ndi ahia gha adighi njikere isoro ndi ahia ha. tụkwasịrị obi Lee ụfọdụ ihe nchọpụta:
Kedu ihe ndị ahịa na-eche n'ezie banyere mmemme iguzosi ike n'ihe? Ha na-akụ ngwaahịa n'efu. Pasent 49 nke ndị zaghachiri kwuru na ha ga-enye ozi nkeonwe maka mmemme iguzosi ike n'ihe, mana ọ bụ naanị pasent 41 ga-eme otu ihe ahụ maka ngwaahịa na ọrụ n'efu.
Kedu ihe ndị ahịa na-eche n'echiche banyere nyocha ụlọ ahịa? Ha na-ajụ ya. Pasent 76 nke ndị zaghachiri na smartphones anaghị enwe ntụsara ahụ na ndị na-ere ahịa na-enyocha mmegharị ụlọ ahịa ha.
Kedu ihe ndị ahịa na-eche n'ezie maka atụmatụ nzuzo mkpanaka? Ha anaghị eji ha. Pasent 72 nke ndị zaghachiri ụwa na-adịkarịghị ma ọ bụ na-ejighị atụmatụ "Esochina" ma ọ bụ "Incognito" nke ga-enye ha ohere ịpụ na nsuso weebụsaịtị.
Budata akwụkwọ akụkọ zuru ezu, Ihe omuma ahia ahia na nzuzo nke ndi ahia: Ihe ndi ahia gi n’eche.
Tags: nzuzo nke ndị ahịadata nzuzoinstore nsusonzuzo nzuzo
EbeIt: Nnukwu nseta ihuenyo ngwa ngwa, ọnụahịa jọgburu onwe ya